L - Akara Ntughari Uche & Ntuziaka | Nkọwa Okwu - Nkọwa Okwu
AK DKỌ DREAM D - LBỌR L L - Letus na nrọ
AK DKỌ DREAM
L - Ihe nnọchi anya nrọ na ihe ọ pụtara
Akwụkwọ ozi ahụ
Akwụkwọ ikike - Lycanthropy
( hụ Ahụ, Ọmụmụ, Mmepụ )
Maka nwanyị na-eru nso na njedebe nke afọ ime, ma ọ bụ onye òtù ọlụlụ ya, nke a bụ nrọ ọnọdụ nke na-achọghị nkọwa ọzọ.
N’ụzọ ihe atụ n’ịrụrụ ọrụ ngo ma ọ bụ mmekọrịta na-enwe olileanya nke ịmịpụta mkpụrụ.
Ọ bụrụ n ’imebi iwu, jụọ onwe gị ma ọ bụrụ na ị gaghị agarịrị ihe n’ụzọ na-ezighi ezi, na-eme ka inweta ihe mgbaru ọsọ gị sie ike karị.
Ọrụ mmanye na-anọchite anya mmetụta dị ka a na-amanye gị ịmalite ihe n'oge na-adịghị anya, nke ị nwere ike ọ gaghị akwadebe kpamkpam.
( lee nrịgo, ịrị, ugwu, steepụ )
Na ihe omimi, nrigo elu nke ugbo elu nke ime mo. N’Ijipt oge ochie, ubube nke Set nwere ndị mmụọ ozi n’akụkụ nke ọ bụla nke nyeere ndị Fero aka iru eluigwe.
Na-amalite site na ike ime mmụọ (rịba ama ọkwa Jekọb na Agba Ochie).
Ọchịchọ maka, ma ọ bụ nwetazu ihe ọmụma na Asia na China.
Na-agbada ala: Nnyocha miri emi na internalization.
Ditụgharị uche n’elu ebe a na-agbago agbago na-anọchi anya oké ọchịchọ ndị na-egbu egbu bụ́ ndị pụrụ iduga n’ọda siri ike.
( lee Mmiri )
Mmiri bụ ihe atụ nke subconscious. Mụta banyere Mmewere nke Mmiri ya mere ị nwere ike ịghọta nke ọma ihe nrọ gị na-achọ ịgwa gị.
Egwu nke ịbụ onye nsogbu ( lee Crutch, Paralyzation ).
Mmetụta na-enweghị isi na ị bụ onye na-adịghị ike n'ọnọdụ gị ugbu a.
Egwu adịghị ike.
Inwe ihe mgbochi nke na-eme ka gị na mmadụ ma ọ bụ ọnọdụ gị ghara ịga n'ihu.
( lee kandụl, ọkụ, ọwa )
Ntughari ncheta nke ebe ma obu ebe ichoro na mbu. Jụọ onwe gị ma ọ dị ihe banyere mpaghara ahụ ma ọ bụ ahụmịhe metụtara ọnọdụ gị ugbu a.
Ọ bụrụ n’ịgabeghị ebe a mbụ, tụlee aha ya, ebe ya na akara aka ya maka uru ịkọwapụta. Dịka ọmụmaatụ, ịhụ 'Onye Ochie Kwesịrị Ntụkwasị Obi' nwere ike ịkọwa oge ma ọ bụ nraranye gị ( lee Mmiri ).
kedu ihe mbara igwe dị na mbara igwe anyị
Enwere ike igosipụta ihe ncheta site na ahụmịhe ndụ gara aga. N'agbanyeghị nke ahụ, ọ dị ihe dị mkpa banyere ahụmịhe metụtara kpọmkwem ọnọdụ gị ugbu a.
Ihe ncheta ndị na-egosi na ị na-eguzosi ike n'ihe nye mmadụ, ihe, ma ọ bụ ọnọdụ. Iguzosi ike n'ihe dị otú ahụ nwere ike ịbụ ihe ọma ma ọ bụ mmetụta ọjọọ, yabụ lelee ọnọdụ ncheta ahụ maka nghọta ọzọ ebe a.
( lee Ọdachi, .wa )
Mmalite asụsụ a, ọ bụrụ na amara ya, nwere ike ibubata ebe a. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ezinụlọ gị sitere Italytali na ị na-arọ nrọ na Italiantali, nke a nwere ike ịbụ ihe na-edoghị anya ịmatakwu banyere ihe nketa gị.
Akwụkwọ ozi ndị dị n'asụsụ ụfọdụ, dị ka Norse na Germanic runes na ụfọdụ mkpụrụedemede Hebraic, nwere ụkpụrụ ihe atụ akọwapụtara nke ọma. Iji nwetakwuo nghọta, gụọ akwụkwọ banyere asụsụ kwesịrị ekwesị n'ọ́bá akwụkwọ dị n'ógbè gị, ma ọ bụ jụọ onye maara asụsụ ahụ nke ọma ( lee Pictographs ).
Ọ bụrụ na amataghị asụsụ ahụ, dee ya n’olu olu n ’olu gị maka ọdịnihu. Nke a nwere ike ịbụ ncheta ndụ gara aga, ozi mmụọ, ma ọ bụ ụdị glossolalia (na-asụ asụsụ dị iche iche) nke enwere ike ịkọwa mgbe emechara.
Nsogbu nkwukọrịta (dịka, onye 'anaghị asụ asụsụ gị').
Lapis Lazuli Nrọ
( lee Crystals, Gems, ọla, Nkume )
Uche Chukwu, na Chukwu n’ime onwe. Ndị eze na ndị nwanyị na-eyikarị lapis iji kwado ngọzi na iji gosipụta ikike Chineke.
Na-ekwusi ike na nnwere onwe gị. Na Sumer na akụkụ ndị ọzọ nke ụwa oge ochie, a na-eji lapis eme ihe dị ka mbinye aka mbadamba n'adịghị ka akara ngosipụta amaala, ma ọ bụ akara anyị nke oge a.
Agba lapis na-eme ka ọ bụrụ akara nke mmụọ mmụọ, udo, na mmụọ na-ewuli elu.
Ọ bụrụ na ndị hụrụ ya n'anya yie nrọ, nke a na-egosipụta ntinye na ikwesị ntụkwasị obi.
( lee Clown, Jester, ọchị )
Kedu ụdị ọchị ọ bụ? Ọchị a laụrị na-egosipụta oge ọ happyụ na ndụ gị. N'aka nke ọzọ, ịkwa emo nwere ike ịbụ nke ị chọpụtara na o si n'aka ndị ọzọ, ma ọ bụ sitere n'ime onwe gị.
N’ụzọ atụ, ọgwụ kacha mma iji bulie elu ma nyere aka nkwali. Ọ bụrụ na mmadụ nwere ike icheta ịchị ọchị na ndụ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile dị mfe.
( lee Ọdachi, Ọkụ )
Dị ka nwa nke ugwu mgbawa, nkume a na-anọchite anya mgbawa okike nke ụdị ụfọdụ. Nke a bụ ngosiputa nke nghọta, bụrụ ihe mgbochi na-egbochi nka nka, ma na - eweta ezigbo ọgụgụ isi.
Hawaii: Ahụike na ọdịmma, ọkachasị ma ọ bụrụ na ahụrụ mmadụ na gburugburu okwute lava. A na-egosipụta ọgwụgwọ na nsacha ka njọ site na ịnọ n'ime ọkụ na-asọ asọ.
Mmekọrịta na okike. Akụkọ akụkọ ndị Hawaii na-ekwu na chi nwanyị Pele anaghị ekwe ka onye ọ bụla were okwute lava na-ahapụghị obere onyinye nke na-egosi na onyinye ụwa bụ.
Lava na-asọ asọ na-aghọ osimiri ọkụ, na-egosi otu ụzọ ọkụ na-agba ọkụ maka ndụ gị ugbu a. Ka o sina dị, lava na-ajụ oyi n’ikpeazụ, dị ka ọnọdụ ga-adị. Site na edozi, ntọala ọhụrụ ga-emepe.
Nrọ maka lava n'ozuzu ya gunyere oku. Mụta ihe niile banyere Isi nke Fire ya mere i nwere ike imekwu omimi banyere nrọ gị!
( lee okooko osisi, ubi, ahihia )
Gụọ ihe niile banyere Akara Dị Nsọ na Nkọwa nke Ifuru ...
Nrọ banyere lavender nwere ike ịgụnye akara na nkọwa ndị a:
mee aries na ọba akwukwo
Lovehụnanya na agụụ. N'oge emepechabeghị emepe, a na-ejikarị nke a dị ka aphrodisiac ma ọ bụ mgbakwunye na ọgwụ ọgwụ. Ndị akwụna na-eyikwa sprigs iji dọta azụmahịa.
Taa ndị mmadụ na-eji lavender echebe uwe ha pụọ ​​n’ọrịa aghara. Kedu ihe ọ dị mkpa ka ị wepụ na nchekwa ma chebe ya tupu ebibie ya?
Ọcha nke ụdị ụfọdụ. Na Latin, okwu maka lavender pụtara 'ịsacha,' ndị Greek na ndị Rom họọrọ lavender n'ụlọ ịsa ahụ.
Mmetụta dị mma. Na aromatherapy, a na-etinye senti nke lavender iji mee ka ahụ dị nro.
( lee Ọla )
( lee Ubi, Oke ohia, Osisi site na udi, Osisi )
Raking: Nhichapu ihe ochie, ma ọ bụchaghị na-enweghị uru. Rịba ama na akwụkwọ ochie na-enye nri ala, dị ka oge gara aga na-eme gị onye ị bụ taa.
Budding on a tree: mmalite ohuru ( lee Mkpụrụ osisi, Ifuru, Ubi ).
Rustling: omenaala ma ọ bụ akara ngosi sitere na mbara igwe nke ị kwesịrị ị na-ege ntị nke ọma. Ndị Gris oge ochie jiri ụda nke ahịhịa na-agba agba site na osisi oak dị nsọ na Dodona dị ka usoro oracular.
( lee Mkpụrụ osisi, ihe ọ Juụ Juụ, Osisi )
Iri lemon ma ọ bụ ị lemonụ lemọn nwere ike igosi mkpa maka ịsacha na ịcha ahụ gị. Lemọn nwere eke purgative mma.
Sọpụrụ, ntinye, ikwesị ntụkwasị obi, na ịhụnanya. Na emepechabeghị, lemọn bụ ihe a na - ahụkarị n'ịkọ ọgwụ.
Ọ bụrụ na nwanyị na-arọ nrọ nke lemọn, ọ na-egosipụta ọdịmma na mmekọrịta.
Omume dị ilu.
Jiri nlezianya mee ihe nhụjuanya (dịka, 'mgbe ndụ gị lemọn, mee lemonade').
( hụ Fairy )
( lee Nri, Ubi, Akwụkwọ nri )
A na-atụle ihe ọ juiceụ whiteụ ọcha nke akwukwo nri a na mmiri ara nne ma ọ bụ ọbara ọcha, si otú ahụ na-anọchite anya ọmụmụ ma ọ bụ arụpụta ihe.
N’etiti ndị Grik, a na-eji letus gosipụta ndụ na-emebi emebi nke ndụ, akụkụ ya nwere ike funahụ ma ọ bụ wepụ ụfọdụ. Na ụgbọ elu nrọ, nke a nwere ike bụrụ na ị ga-efunahụ gị.
A na-agụ kpakpando, nke a bụ nri amị n'ọnwa, yabụ na ọ nwere ike bụrụ akara ngosi ọnwa ọzọ.
Agba akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nke letus na nhazi ya na-enye ya mmekọrịta ụfọdụ na ego. Iji maa atụ, ọ bụrụ na ihe na-eju gị ụra na nrọ gị nile, ikekwe ị na-eche na mmadụ ma ọ bụ ihe na-erikwa ego gị n'ụgbọ elu ahụ.
Ọ bụrụ na a na-eri letus ahụ na nrọ, nke a na-ekpughe nbelata agụụ mmekọahụ.
kedu ụwa nke kacha dịrị nso na anyanwụ
ụmụ anụmanụ american na ihe ha pụtara